Calendly: သင်၏အွန်လိုင်းအစည်းအဝေးစီစဉ်သူ Martech Zone
Calendly - သင်၏အွန်လိုင်းအစည်းအဝေးစီစဉ်သူ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇန်နဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၂ Douglas Karr
ဘယ်အချိန်မှာဘလက်ဘယ်ရီမျိုသောအခါ ရှုပ်ထွေး ပြီးတော့အဆုံးသတ်ငါတကယ်စိတ်ပျက်ခဲ့ပါတယ်။ ရှေးရှေးလူတန်းစားတွေကကျွန်တော့်ကိုသူတို့ပလက်ဖောင်းနဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ဖို့အရမ်းလွယ်တယ်။ ကျွန်တော်ပေးခဲ့ပြီး အချိန်ဇယား သွားရပေမယ့်အရမ်းရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ ငါနဲ့လူတွေအတွက်ငါအစည်းအဝေးတွေစီစဉ်ချင်တယ်။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က၏ Jeb Banner ပိုးသတ်ဆေး ငါ့ကိုသူနှင့်သူနှင့်တွေ့ဆုံရန်အချိန်ဇယားဆွဲရန်ကျွန်ုပ်အား URL တစ်ခုပို့ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်ချက်ချင်းပင်ချစ်ခဲ့သည်။ စင်မြင့်ဟုခေါ်သည် Calendly ပြီးတော့ငါ Tungle ထက်တောင်ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောရဲ
ဤတွင်ကျွန်ုပ်၏ Calendly ပုံစံအတိုင်းဖြစ်သည်
Calendly သည်သင်၏ဖြစ်ရပ်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခွင့်ပေးပြီးသင်၏ဂူဂဲလ်ပြက္ခဒိန်နှင့်ပေါင်းစပ်သည်။ ဖိတ်ကြားထားသူများသည်စီစဉ်ထားသောဖြစ်ရပ်များကို၎င်းတို့၏ဂူဂဲလ်၊ Outlook သို့မဟုတ် iCal ပြက္ခဒိန်များတွင်အလွယ်တကူထည့်နိုင်သည်။
ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို နှိပ်၍ အချိန်ရွေးစရာများကိုတွေ့နိုင်သည်။
တက်ရောက်သူများအတွက်သတိပေးချက်များကိုမတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်နှင့်အလိုအလျှောက်ကြားခံရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။ ငါပလက်ဖောင်း၏ငါ့အကြိုက်ဆုံးအင်္ဂါရပ်များထဲမှတစ်ခုချင်းစီကိုဖြစ်ရပ်အမျိုးအစားတစ်ခုစိတ်ကြိုက် URL ကိုရှိသည်! ထို့ကြောင့် - ကျွန်ုပ်သည်ဖောက်သည်တစ် ဦး အားစာရင်းစစ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (သို့) တစ်ရက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်ဖိတ်ကြားလိုပါကကျွန်ုပ်သည်၎င်းတို့အားပွဲစဉ်အမျိုးအစားသို့တိုက်ရိုက်ပေးပို့နိုင်သည်။
Douglas Karr Wednesday, January 8, 2014
8:2014 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 11, 35
ဘုရားရေ! ဒီ Doug ကိုမျှဝေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! မင်းလည်းငါ့ Tungle ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးငါလည်းမင်းရဲ့ခေါင်းကိုခြစ်ခြစ်နေတာကိုး။ ငါတက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါပြီနှင့်အကျွမ်းတဝင်လာပြီနေပါတယ်။
ဇန်နဝါရီ 9, 2014 မှာ 12: 37 AM
@gregcross: ငါကဲ့သို့စိတ်လှုပ်ရှားစွာအသံမြည်သည်။ အဲဒါတကယ်ကောင်းပါတယ်
ဇန်နဝါရီ 9, 2014 မှာ 3: 00 AM
ခွဲဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Doug ။ Tungle သည်ပါတီများနှင့်ကွန်ယက်လှုပ်ရှားမှုများမှလူများအားဖော်ပြရန်ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာဖြစ်ပြီး၎င်းသည်မည်သည့်နေရာတွင်မှအစားထိုးခံရခြင်းမှပျောက်ကွယ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီလှလှပပကြည့်နေတဲ့အစားထိုးလှည့်ပတ်မျှော်လင့်ပါတယ်ကြပါစို့။ ကျွန်ုပ်သည်အလောင်းအစားတွင်“ ကျွန်ုပ်သည် Tungle မပါဘဲပျောက်ဆုံးနေသည်” အထောက်အကူပြုအဖွဲ့ကိုလိုအပ်နေသည်။
10:2014 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 9, 42
@greg_allbright: မကြာခဏသွားသောအခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းကိုကျွန်တော်စိတ်ဆိုးမိသည်။ သို့သော်လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ကစိတ်မသာညည်းတွားနေသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ငါ Calendly တကယ်တော့တစ် ဦး Wee နည်းနည်းပိုကောင်းပါဘူးယုံကြည်!
ဇန်နဝါရီ 9, 2014 မှာ 9: 38 AM
ဤအဖြစ်အပျက်မျက်နှာပြင်တွင်အနည်းငယ်ညံ့ဖျင်းမှုရှိပါသည်။ ဖြစ်ရပ်များကိုဖန်တီးပြီးတင်ရန်ကောင်းသောနည်းလမ်း။ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသော url သည်၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်တစ် ဦး အတွက် event entry interface နှင့် custom ပြက္ခဒိန်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်ဖန်တီးခဲ့သော်လည်း၎င်းသည် UI ကဲ့သို့သိပ်မထူးခြားပါ။ ကောင်းတဲ့အလုပ်။
10:2014 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 1, 23
Clendly ကိုငါမသုံးသေးသော်လည်း Tungle သည်လည်ပတ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်ဟုငါထင်သည်။ အသုံးပြုရလွယ်ကူပုံမပေါ်ပါ ဒါမှမဟုတ်ငါကသုံးပြီးပြီးနောက်မှတ်ချက်ပေးရန်သင့်ပါတယ်! 🙂
10:2014 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 9, 41
ကျိန်းသေကရိုက်ချက်ပေးပါ။ အရမ်းလွယ်တယ်။ တကယ်တော့၊ ဖြစ်ရပ်လမ်းကြောင်းကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ခြင်းသည်လူတို့နှင့်သင်နှင့်အတူအချိန်ဇယားဆွဲရန်မယုံနိုင်လောက်အောင်လွယ်ကူစေသည် ငါတပတ်လုံးသုံးခဲ့တယ်။ တိုင်ကြားချက်တစ်ခုမှမရှိဘူး။
10:2014 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 7, 04
Doug မျှဝေခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ app ကိုကြိုက်တယ်နှင့်ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာအသုံးပြုခဲ့သည်။ တကယ်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ် အခြားသူတွေဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ခုန်ကြည့်ဖို့ဝမ်းမြောက်။ ငါလည်း Tungle ပန်ကာကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ပျောက်ကွယ်သွားသည်ကိုမြင်တွေ့ရသည်။ Calendly အကြောင်းလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ခန့်ကလာခဲ့ပါ။ ကကပ်ထားပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
10:2014 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 9, 40
BlackBerry ဟာသူတို့ရဲ့ Tungle နည်းဗျူဟာကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်သည်။ သူတို့ဟာအနည်းငယ်သာလုပ်နိုင်သည်။ 🙂
ဧပြီ 9, 2015 မှာ 4: 54 pm တွင်
ဟိုင်း Doug ငွေပေးချေမှုကိုပေါင်းစည်းရန်နည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါသလားသို့မဟုတ်သင်ငွေပေးချေမှုကိုအခြားနည်းဖြင့်စုဆောင်းကောက်ယူပြီးပါက calendly link ကိုပေးပို့ပါသလား။
ဧပြီ 11, 2015 မှာ 12: 26 pm တွင်
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ငါတို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေကိုလတ်ဆတ်တဲ့စာအုပ်တွေသုံးပြီးငွေတောင်းခံပါတယ်။ Calendly နဲ့မပေါင်းဘူး။